၂၀၂၀ ခုနှစ် အဆင့် သတ်မှတ်ချက်: ၁၂၅
၂၀၂၀ (DTF) ရမှတ်*: ၅၆.၅ (၂၀၁၉ ခုနှစ်ရမှတ်ထပ် ၃.၇ တိုး)
* ပန်းတိုင်မှ ဝေးကွာမှုရမှတ် DTF သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီက “ ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံ( Frontier ) နှင့် မည်မျှဝေးကွာနေသည်ကို ဖော်ပြသည်။ ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံဆိုသည်မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်သည့် Doing Business အညွှန်းကိန်းအားလုံးတွင် အကောင်းဆုံးစွမ်းရည် ပြသနိုင်သည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပန်းတိုင်မှ ဝေးကွာမှုသည် ၀ မှ ၁၀၀ အထိဖြစ်နိုင်ပြီး ၀ သည် စွမ်းဆောင်ရည် အနိမ့်ဆုံးကိုလည်းကောင်း ၊ ၁၀၀ သည် ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံကိုလည်းကောင်း ကိုယ်စားပြုသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ရန် လွယ်ကူမှု အညွှန်းကိန်းအဆင့်သည် ၁ မှ ၁၉၀ အတွင်း ဖြစ်သည်။( ဇာစ်မြစ် - ကမ္ဘာ့ဘဏ်)
ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကြာချိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် မြေယာစီမံခန့်ခွွွဲမှုစနစ်၏ အရည်အသွေး
အိမ်ခြံမြေသည် အမျိုးသား ကြွယ်ဝမှု၏ ၅၀-၇၅ % ကို တွက်ချက်ပေးသည်-
စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် မြေယာ၏ ၃၀% ကိုသာ မြေမှတ်ပုံတင်ထားရှိသည်။
မှတ်ပုံမတင်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုသည် (စာရင်းသေအရင်းအနှီး) ဆုံးရှုံးမှု အရင်းအနှီးဖြစ်သည်။
အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်သူများသည် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများသော ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ပြုလုပ်မည် မဟုတ်။
မြီရှင်တို့သည် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများသော ငွေချေးခြင်းကို ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။
အစိုးရ၏ အခွန်ဝင်ငွေရရှိမှု ဆုံးရှုံးနစ်နာမည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် ငွေကြေးကဏ္ဍနှင့် ဖွွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတို့ကို ပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့် လုံခြုံမှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးတက်ရေးကို ဦးတည်သည်။
အစိုးရ၏ မြေခွန်ပိုမိုရရှိခြင်းနှင့် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နိုင်မှုစွမ်းရည် တိုးလာသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် Doing Business အစီရင်ခံစာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သတ်မှတ်သည့်ရမှတ်
မြေယာမှတ်တမ်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦအညွှန်းကိန်း၏ စိတ်ချရမှု (၀-၈) ၀.၀
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်း တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ၊ စီမံကိန်းနှင့် မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနဟု ဖော်ပြထားခြင်းအား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲ့မှုဌာန
စီးပွားရေးအရ အကြီးဆုံးမြို့ကြီးတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်စာရင်း သို့မဟုတ် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်တမ်းများကို အဓိကထိန်းသိမ်းသည့် ပုံစံ (စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း) စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း နှစ်မျိုးကို အဓိက ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၀.၀
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ ကန့်သတ်ထားခြင်း စသည့် မြေနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးနိုင်သော electronic database များရှိ/ မရှိ မရှိပါ။ ၀.၀
စီးပွားရေးအရ အကြီးဆုံးမြို့ကြီးတွင် ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားရှိသည့် နယ်နိမိတ်များကို ပြသနိုင်သော အစီအစဉ်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ၊ စီမံကိန်းနှင့် မြေယာ စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊
စီးပွားရေးအရ အကြီးဆုံးမြို့ကြီးတွင် ကွက်စိတ်မြေပုံများကို အဓိကထိန်းသိမ်း ထားရှိသည့် စနစ် - စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း( စာရွက်စာတမ်းကို scan ဖတ်၍ ထိန်းသိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် Digital စနစ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း) စာရွက်စာတမ်းပုံစံဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း ၀.၀
နယ်နိမိတ်များ၊ စီမံကိန်းစစ်ဆေးခြင်းများနှင့် မြေယာဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များကို ထောက်ပံ့သည့် မှတ်တမ်းများ (မြေပြင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်စနစ်) အတွက် electronic database ရှိ၊ မရှိ မရှိ ၀.၀
မြေယာမှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် မရွေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းခြင်းကို မှတ်ပုံတင်သည့် အဖွဲ့အစည်းတို့က ထိန်းသိမ်းထားရှိသော သတင်းအချက်အလက်များသည် database တစ်ခုတည်း၊ သို့မဟုတ် သီးခြားစီဖြစ်သော်လည်း ချိတ်ဆက်မှုရှိသော database စနစ် သို့မဟုတ် သီးခြားထားရှိသည့် စနစ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သီးခြားထားရှိခြင်း ၀.၀
မြေယာမှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် မရွေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းခြင်းကို မှတ်ပုံတင်သည့် အဖွဲ့အစည်းတို့သည် မြေကွက်အမှတ်များကို သတ်မှတ်ရာတွင် တူညီသော စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်း ရှိမရှိ မရှိပါ။ ၀.၀
သတင်းအချက်အလက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အညွှန်းကိန်း (၀-၂)
စီးပွားရေးအရ အကြီးဆုံးမြို့ကြီးတွင် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း မှတ်ပုံတင် ခြင်းကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းထံမှ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ပတ် သက်၍ သတင်းများကို ရယူနိုင်မည့်သူများ သတ်မှတ်ထားသည့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ပေးသည့်မည်သူမဆို ၁.၀
ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းကို နှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ရှိ၊ မရှိ ရှိပါသည်။ https://app.ycdc.gov.mm
တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ၀.၅
စီးပွားရေးအရ အကြီးဆုံးမြို့ကြီးတွင် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို ပြုစုထုတ်ပြန်ထားခြင် ရှိမရှိ Update အချက်အလက်
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက် သည့် အဖွဲ့အစည်းသည် သတ်မှတ်သည့် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှုကို သက်သေပြနိုင်ရန် ဥပဒေအရ တရားဝင်ဖြစ်သော အထောက်အထားများ ထုတ်ပေးခြင်း ပြု/ မပြု၊ ပြုပါက ဝန်ဆောင်မှု စံနှုန်းကို မည်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ပုံ အခြား ၀.၅
မရွေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက် သည့် အဖွဲ့အစည်း၌ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့ ပါက တင်ပြဖြေရှင်းနိုင်သည့် သီးခြားအဖွဲ့ သို့မဟုတ် တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားသည့် အဖွဲ့ ရှိမရှိ
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း များပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မကျေနပ်မှုများအား စောင့်ကြည့်ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်မှာ လက်ရှိတည်ဆဲ ဉပဒေတစ်ရပ်ဖြစ်သော ၂၀၁၈ ခုနှစ် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဉပဒေ နည်းဉပဒေ များအရစာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်အပေါ် တစ်စုံတစ်ရာ ကျေနပ်မှုမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အရာရှိ အဆင့်ဆင့်ထံတွင် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင် ဉပဒေနှင့်အညီ အယူခံ ဆက်လက်လျှောက်ထားဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးရှိသဖြင့် စောင့်ကြည့်သည့် တတိယအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန်မှာ ဉပဒေအရ ဆောင်ရွက်၍မရနိုင်ပါ၊၊
မရွေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက် သည့်အဖွဲ့အစည်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက် အလက် များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ရှိမရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မရွေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၈ခုနှစ်မှစ၍ (၃)လလျှင် တစ်ကြိမ် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန Website ဖြစ်သည့် [email protected] နှင့် မိမိဌာန Website ဖြစ်သည့် www.dalms-rdinfo.gov.mm တို့တွင် အများပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးလျက်ရှိပါသည်၊၊ ၀.၀
အကြီးဆုံးစီးပွားရေးမြို့တော်တွင် မြေပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဉာဏ်ရယူ ဆွေးနွေးခြင်းကို ဆွေးနွေးရန် မည်သူနှင့် ဆွေးနွေးရမည်နည်း။ နိုတြီများ၊ ရှေ့နေများစသည်ဖြင့် ၀.၀
မြေပုံများ ရယူနိုင်ရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိ။ ရှိပါက မည်ကဲ့သို့ ထုတ်ပြန်ထားသနည်း။ ရှိပါသည်။ ၀.၀
မြေပုံနှင့်မြေယာမှတ်တမ်းများဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းသည် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း နောက်ဆုံးပေါ် မြေပုံများကို ထုတ်ပေးခြင်း ပြုမပြု၊ ခွင့်ပြုပါက ဝန်ဆောင်မှု စံနှုန်းကို မည်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသနည်း? မပြုပါ။ ၀.၀
မြေပုံနှင့်မြေယာမှတ်တမ်းများဆောင်ရွက်သည် အဖွဲ့အစည်းတွင် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့ ပါက တင်ပြဖြေရှင်းနိုင်သည့် သီးခြားအဖွဲ့ သို့မဟုတ် တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားသည့် အဖွဲ့ ရှိမရှိ [Update required] ၀.၀
မြေပြင်အခြေအနေလွှမ်းခြုံမှု အညွှန်းကိန်း (၀-၈) ၀.၀
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် မြေကွက် အားလုံးကို တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်း ရှိမရှိ မရှိပါ။ ၀.၀
အကြီးဆုံးစီပွားရေးမြို့ကြီးတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေကွက်အားလုံးကို တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းရှိ၊ မရှိ မရှိပါ။ ၀.၀
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေကွက်အားလုံး၏ မြေပုံများ ရေးဆွဲထားခြင်း ရှိမရှိ၊ မရှိပါ။ ၀.၀
အကြီးဆုံးစီပွားရေးမြို့ကြီးတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေကွက်အားလုံး၏ မြေပုံများ ရေးဆွဲထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ။ မရှိပါ။ ၀.၀
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ပေးသည့်် အဖွဲ့အစည်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းရောင်းဝယ်ခြင်းအားလုံးကို တတိယလူ ပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ကန့်ကွက်မှုပြုလုပ်ရန် ဥပဒေလိုအပ်ပါသလား? လိုအပ်ပါသည်။ ၁.၅
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ပေးသည့်် အဖွဲ့အစည်းက သက် သေခံထုတ်ပေးသော သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းမှုကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပြောင်း ခြင်းပြုလုပ်သူတစ်ဦးဦးက ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုဖြစ်ပွားသည့်အခါ လျော်ကြေး ငွေ ပေးလျော်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ရှိပါသလား? မလိုအပ်ပါ။ မလိုအပ်ပါ။
အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်အတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို တရားဝင် ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ဥပဒေစနစ်က လိုအပ်ပါသလား? လိုအပ်ပါသည်။ ၀.၅
အကယ်၍ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ၏ တရားဝင်ဖြစ်မှုကို စစ်ဆေးဖို့အတွက် မည်သူမှာ တာဝန်ရှိပါသလဲ။ စာချုပ်စာတမ်း
အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်အတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများ မှန်ကန်မှုရှိမရှိကို ဥပဒေစနစ်အရ စိစစ် အတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပါသလား? လိုအပ်ပါသည်။ ၀.၅
ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်သူများ မှန်မမှန် အတည်ပြုခြင်းကို မည်သူက ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသနည်း? စာချုပ်စာတမ်း
စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ၏ တိကျမှန်ကန်မှုကို အတည်ပြုဖို့
ရန်အတွက် national database ရှိပါသလား။ မလိုအပ်ပါ။ ၀.၀
အကြီးဆုံးစီးပွားရေးမြို့တွင် လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ(Gross National Income) ထက် အဆ (၅၀) တန်ဖိုးရှိသော မြေကွက်တစ်ခု၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အပေါ် နှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုအကြား အငြင်းပွားသည့် မြေယာအငြင်းပွားမှုကို မည့်သည့်တရားရုံးအဆင့်က စတင် စစ်ဆေးရမည်နည်း? ရန်ကုန်မြို့ ၊ ခရိုင်တရား
ရုံး (၄) ရန်ကုန်မြို့
အငြင်းပွားမှုတစ်ခုအား စတင်စစ်ဆေးရသည့် တရားရုံးတွင် အမိန့်ချမှတ်ရန် အချိန်မည်မျှ ကြာသနည်း? ( ၂ )နှစ်နှင့် (၃) နှစ်အကြား ၁.၀
အငြင်းပွားမှုကို စတင်စစ်ဆေးသည့် တရားရုံးများတွင် စစ်ဆေးသည့် မြေယာ အငြင်းပွားမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော စာရင်းဇယားရှိပါသလား။ Update လိုအပ်ပါသည်။ ၀.၀
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ ညွီမျှမှုအညွှန်းကိန်း (-2-0)
လက်မထပ်ရသေးသည့်အမျိုးသားနှင့် လက်မထပ်ရသေးသည့် အမျိုးသမီးတို့တွင် ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေးများ တူညီစွာရရှိနိုင်သလား။* ရရှိပါသည်။ ၀.၀
လက်ထပ်ပြီးအမျိုးသားနှင့် လက်ထပ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာလည်း ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့် အရေးများတူညီစွာ ရှိပါသလား။* ရှိပါသည်။ 0.0
*ကျားမတန်းတူအခွင့်အရေးရှိမှုအတွက် အမှတ်မတွက်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျားမတန်းတူအခွင့်အရေးမရှိလျှင် အမှတ်များကို လျှော့ပါသည်။ ယင်းကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးသင့်ပါသည်။
၁ သက်သေခံမြေပုံနှင့် မြေ ရာဇဝင်ကို မြို့ပြနှင့် မြေယာ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊ ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီတွင် လျှောက်ထား
ရယူခြင်း လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအပါအဝင် လုပ်ငန်းစဉ်အချက်အလက်အသေးစိတ်တို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
19 days kyats
10125 kyats for group 1 (most recently developed )
12945 kyats for group 2(second developed )
15225 kyats for group3(first developed )
၂ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများတွင် မြေ၏ ကာလ တန်ဖိုးစိစစ် သတ်မှတ်ရန် လျှောက်ထား ရယူခြင်း လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအပါအဝင် လုပ်ငန်းစဉ်အချက်အလက်အသေးစိတ်တို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၁၄ ရက်
၁၀၀၀ ကျပ်မှ ၆၀၀၀ ကျပ်ကြား
၃ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများတွင် တံဆိပ်ခေါင်း ခွန် ထမ်းဆောင်ခြင်း လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအပါအဝင် လုပ်ငန်းစဉ်အချက်အလက်အသေးစိတ်တို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၁ ရက်
၄ ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းစာချုပ် စာတမ်းကို လယ်ယာမြေစီမံ ခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီး ဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအပါအဝင် လုပ်ငန်းစဉ်အချက်အလက်အသေးစိတ်တို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၁၅ ရက်
အစိုးရက သတ်မှတ်နှုန်းထား ၀.၅ %
စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်သည် ဝယ်ယူသူက ပေးဆောင်ရ သည့် တန်ဖိုးအပေါ် မူတည်နေ ပါသည်။
၅ ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းကို သတင်းစာတွင် ကြေညာခြင်း လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအပါအဝင် လုပ်ငန်းစဉ်အချက်အလက်အသေးစိတ်တို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၁ ရက်
ဒေသတွင်း သတင်းစာတွင် ဖော် ပြ ခြင်းအတွက် ၁၈၀၀၀ ကျပ် ကုန်ကျကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းတွက်ချက်သည်။
၆ ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီတွင် ပိုင်ရှင်မှု အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲခြင်း လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအပါအဝင် လုပ်ငန်းစဉ်အချက်အလက်အသေးစိတ်တို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
1 day (After Registration at office of the Registration of Deeds and after advertised at newpaper( The Mirror Daily )
30000 kyats for group 1 (most recently developed )
40000 kyats for group 2(second developed )
50000 kyats for group3(first developed )
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန အနေဖြင့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်သည့်စာချုပ်အား မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၏ ကြားမြင့်ချိန်ကို ၃၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်သို့ လျှော့ချထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်း အင်းဉီးစီးဌာနတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်း စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ကြာမြင့်ချိန်ကို (၃၁) ရက်မှ (၁၅) ရက်သို့ လျှော့ချ ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဉီးစီးဌာနမှ ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းသည့် စာချုပ် စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက် ဌာနတွင်း မှတ်တမ်းများကို ကွန်ပျုတာစနစ် အသုံးပြု၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်းကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
Online စနစ်ဖြင့် အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ နှစ် ၂၀ စီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်း ထားရှိပါသည်။
စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေ(မူကြမ်း) ရေးဆွဲပြီး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတွင် တင်သွင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းရန် လျှောက်ထားခြင်း နှင့် မြေပုံလျှောက်ထားခြင်း (အဆင့်များအားလုံး ၊ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကုန်ကျစရိတ် နှင့် ကြာမြင့်ချိန်များ ပါဝင်သော အသုံးပြုသူ လမ်းညွှန်စာအုပ်များထုတ်ဝေရန် ။ Short Term - ဌာနအသီးသီး၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု များကို ပြည်သူတို့ သိရှိစေရန်အတွက် ၂၆.၁.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် Registering Property Indicator အဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင် မှုအသင်းတို့ ပူးပေါင်း၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
- စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ Website ,Doing Business ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ ကြာချိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လိုအပ်သော အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းစာရင်းအား ဖော်ပြထားရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။
- စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ ကြာချိန်၊ ကုန်ကျစရိတ် နှင့် လိုအပ်သော အထောက်အထား စာရွက် စာတမ်းစာရင်းအား အများပြည်သူသို့ အသိပေး ဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနပိုင် Web site ကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ နှစ်တွင် ရေးဆွဲ နိုင်ရေး ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားမှု အရေအတွက် စာရင်နှင့် ယင်းတို့ကို ဖြေရှင်း ရန် ကြာမြင့်ချိန် များကို စုဆောင်းပြီး သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ပြန်ရန်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် မြေယာ အမည်လွှဲပြောင်းခြင်း အရေအတွက်ကို နှစ်အလိုက် စာရင်းကောက်ပြီး ထုတ်ပြန်ရန် ဖြစ်သည်။ Short Term [Update required]
လက်ရှိတွင် အကျိုးစီးပွားသက်ဆိုင်သူများသာ ရရှိနိုင်သော မြေပိုင်ဆိုင်မှု ၊ မြေပုံနှင့် နယ်နိမိတ် အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ခွင့်ကို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာဖြစ်မှု တိုးတက်စေရန်။ Long Term [Update required]
အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒနှင့် လိုက်လျော ညီထွေဖြစ်စေမည့် တစ်ခုတည်းသော မြေယာဥပဒေကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ။ Long Term [Update required]
စာရွက်စာတမ်းအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားသော မှတ်တမ်းများ အားလုံးကို ဒစ်ဂျစ်တယ် Format ပုံစံဖြင့် ပြောင်းလဲပြီး မြေယာနှင့် သက်ဆိုင် သော အချက်အလက်အားလုံး ပါဝင်သည့် အီလက်ထရောနစ် ဒေတာဘေ့စ်ကို (digital cadaster) ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ။ Long Term [Update required]
ဒီဂျစ်တယ်မြေပုံ၊ မြေယာမှတ်တမ်းများ ဒdigital cadaster)နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဗဟိုမှ ချုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပြီး မြေယာလွှဲပြောင်းခြင်းကိစ္စများကို မည်သည့်နေရာမဆို ခိုင်မာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော အီလက်ထရောနစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ကိစ္စရပ်များအားလုံးအတွက် စုပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် မှတ်ပုံတင်စနစ်တစ်ခုကို ထူထောင်ရန် Long Term [Update required]
Registering Property Indicator အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဉီးစီးဌာန